किन बोल्दैन काङ्ग्रेस ? – ईमेची डटकम
किन बोल्दैन काङ्ग्रेस ?
विगत केही हप्तादेखि मेचीनगर नगरपालिका चर्चाको शिखरमा छ । सामाजिक सञ्जालदेखि स्थानीय तथा राष्ट्रियस्तरको पत्रपत्रिकाहरुमा मेचीनगरपालिका भएको अनियमितता खबरहरुले प्राथमिकता पाइरहेका छन् । त्यस अन्तर्गत चक्लाबन्दी खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम अख्तियारसम्म पुगेको छ । मकै खेती अनुदान दुरुपयोग सँगसँगै २५ सय ट्रयाक्टर ढुङ्गा गायव, विरुवा वितरणमा अनियमितता, नदी उकास क्षेत्रमा वृक्षारोपण, सडक कालोपत्रमा लापरवाही जस्ता खबरले मेचीनगर पालिका चोकहरुमा तातिएका छन् ।
यस्तो अवस्थामा आम मेचीनगरबासीहरुले यी यथावत विषयमा यहाँको राजनीतिक दलको आधिकारिक धारणा कस्तो आउला भन्ने प्रतिक्षामा छन् । अपुष्ट र दोभाषे खालको भए पनि नेकपाले एउटा प्रेस विज्ञप्ति बाहिर ल्याएको छ । यद्यपी नेकपा केही साथीहरुले समेत उक्त प्रेस विज्ञप्तिलाई अपुरो भनिसकेको अवस्था छ ।
यसबीचमा मुलुकमा सबैभन्दा पुरानो तथा लोकतन्त्र र सुशासनको पक्षमा सधँै अटल रहँदै आएको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस हालसम्म आफ्नो दलको धारणा सार्वजनिक गरेको अवस्था छैन । काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति मुलुकमा हाल बढिरहेको भ्रष्टाचार, वेथिति र अनियनितताको बारेमा एकजुट भएर आवाज बुलन्द गरिरहेको अवस्थामा मेचीनगरपालिका भित्रका मुद्दामा काङ्ग्रेस मेचीनगरको आधिकारिक धारणा नआउनु र उदासिनता देखाउनुले आम मेचीनगरबासीलाई अचम्मित पारिरहेको छ ।
यसको साथसाथै भ्रष्टाचार र अनियमिता विरुद्ध मन र मस्तिष्कबाट आवाज उठाइरहेका र भ्रष्टाचारविरुद्ध चट्टानसरह उभिएका कार्यकर्तालाई निरासा बनाएको छ । अझ यदाकदा भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने कार्यकर्तालाई अराजकको पगरी लगाइदिने र आउने महाअधिवेशनमा “तह” लगाउनेसम्मका अभिव्यक्तिले आउने दिनमा मेचीनगर काङ्ग्रेसलाई कहाँ पु¥याउँछ, त्यो हेर्ने बाँकी छ । के अब काङ्ग्रेसमा पसिनावालाभन्दा पैसावालाको बोलबाला बढेको हो ? प्रश्न उब्जेको छ ।
आफ्नो गाउँघर, नगरमा भएको अनियमिताको बारेमा स्पष्ट धारणासमेत राख्न नसक्ने अवस्थामा हामी पुग्दा आउने दिनमा यसले पार्टीलाई र सङ्गठनलाई मदत गर्ला ? यसको जवाफ नेतृत्वले दिनु जरुरी छ । हाम्रो मौनताले मेचीनगरपालिकामा भ्रष्टाचारलाई संस्थागत हुन बल पुग्नेवाला छ कि छैन ? सोच्ने बेला आएको छ ।
अबको केही वर्षपछि देशमा फेरि तीनै तहको निर्वाचन हुँदैछ । उक्त निर्वाचनमा जाँदै गर्दा काङ्ग्रेसले मुलुकभर नै भ्रष्टाचार, अनियमिततालाई आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाउने निश्चित छ । त्यो बेला वाइटबडी घोटाला, बालुवाटार जग्गा प्रकरण आदि मुद्दाहरुलाई केन्द्रीय रुपमा आफ्नो एजेन्डा बनाइराख्दा आज मेचीनगरमा भइरहेको अनियमितताको बारेमा मौन बसेको काङ्ग्रेसले भोलि कुन नैतिकताको धरातलमा टेकेर यो कुराको उठान गर्छ ? हेर्न बाँकी छ ।
राजनीतिले दिलाएको पदमा आसीन हरेक व्यक्तिले आमा मानिसहरु भ्रष्टाचार चाहँदैनन्, उनीहरु सुशासन चाहन्छन्, समृद्धि अनि विकास चाहन्छन् भन्ने कुराको हेक्का राख्नुपर्दछ । मानिसलाई सुरुवातमा भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध बोल्न गाह्रो हुन्छ । “आश” अनि “त्रास” ले यो अवस्थामा काम गरेको हुन्छ । तर, जब भ्रष्टाचारले आफ्नो सिमाना नाग्छ, यी सब कुरा बिर्सेर मानिस सडकमा आउँछ जसले ठूलाठूला शासकको समेत निदहराम गरेको इतिहास छ । नेतृत्वले यो बुझ्न जरुरी छ ।
पछिल्ला दिनहरुमा मेचीनगरमा दिन प्रतिदिन हामी कमजोर भइरहेको आभाष आम कार्यकर्ताको मनमा छ । हामीले वाणिज्य सङ्घ गुमायौँ, मेचीनगरको अब्बल संस्थामा नेकपाका युवालाई विराजमान गरायौँ, बहुमत हुँदाहुँदै खानेपानीमा नेकपालाई धेरै पद सुम्प्यौँ । यस्ता अरु धेरै उदाहरणहरु छन् । यसको सँगसँगै आज मेचीनगरमा भएको अनियमितताका बारेमा हामीले संस्थागत रुपमा नबोल्न आम मानिसमा हाम्रो दल सम्बन्धी कस्तो धारणा बनिरहेको होला ? सोच्न जरुरी छ ।
नेतृत्वले बुझ्न जरुरी के छ भने मेचीनगरमा उठान भएका अनियमितताका कुरा हाम्रा लागि मेचीनगरलाई भ्रष्टाचारबाट मुक्त गर्ने सुनौलो अवसर हो । प्रमुख समेत हाम्रो दलको भएको अवस्थामा भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलनको नेतृत्व लिने अवसरबाट हामी चुकिरहेका छौँ । भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्छु भनेर र कारवाही गरेर वाहवाही बटुल्ने सुनौलो अवसर मेचीनगर नगरपालिकाका प्रमुखज्यूलाई आएको छ ।
काङ्ग्रेस र काङ्ग्रेस नेतृत्वको नगरपालिकालाई आएको यो एतिहासिक मौका खेर जान दिनु हुँदैन । यो हाम्रा लागि असर हो । यो एतिहासिक अवसरमा हामी विचलित हुनु हुँदैन र सँगसँगै राजनीति अनि राजनीतिले दिलाएको पद जनसेवाको लागि हो । भ्रष्टाचार र अनियमितताका लागि होइन भन्ने सन्देश पनि अब हामीबाटै नै दिन जरुरी छ ।
(लेखक अधिकारी नेपाली काङ्ग्र्रेस क्षेत्र नं १, झापाका क्षेत्रीय सहसचिव हुन् ।)